Baahin: Salaasa, Mar 08, Weriye Kuuriya…Maamulka gobolka Gedo oo sheegaya in ay Alshabab isaga baxday inta badan gobolka …Maamulka gobolka Banaadir oo ugu baaqay shacabkii barakacay in ay ku soo noqdaan degaankoodii; Maxaa keenay baaqaas …Caalimka Islaamiga ah Sheekh Cumar Faaruuq oo ku geeriyooday magaalada Makka …8-da Maarso oo si wayn looga xusay Puntland, Somalia iyo dhammaan daafaha caalamka … – Radio Daljir
Baahin: Salaasa, Mar 08, Weriye Kuuriya…Maamulka gobolka Gedo oo sheegaya in ay Alshabab isaga baxday inta badan gobolka …Maamulka gobolka Banaadir oo ugu baaqay shacabkii barakacay in ay ku soo noqdaan degaankoodii; Maxaa keenay baaqaas …Caalimka Islaamiga ah Sheekh Cumar Faaruuq oo ku geeriyooday magaalada Makka …8-da Maarso oo si wayn looga xusay Puntland, Somalia iyo dhammaan daafaha caalamka …
Maarso 8, 2011 12:00 b 0
Baahin: Isniin, March 07, Weriye Maxamed C/llahi Kooshin …Hargaysa: Xaabsade, wasiirka warfaafinta Somaliland oo guulo ka sheegtay dagaallo maanta ka dhacay bariga Laascaanood …Waa sidee xaaladda degaanka kadib? Waraysi ayaan idinkaga haynaa arinkaas iyo waliba dareenka haweenka Mudug ee dagaalada Gambare …Saxaafadda Somaliland iyo tabinta dagaallada Sool iyo Cayn ? …Bandar Bayla: Qoys Denmark u dhashay oo ay burcad-badeed ku haystaan degaankaas, waraysi arinkaas ku saabsan …